छक्का पञ्जाबाट नसोचेको सफलता पायौंः दिपकराज गिरी – Rangin Sansar Nepal Entertainment Portal
छक्का पञ्जाबाट नसोचेको सफलता पायौंः दिपकराज गिरी
प्रदर्शनको ५१ औं दिन मनाउने तर्खरमा रहेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ले दर्शकको उच्च साथ पाईरहेको छ । हास्यप्रधान यो चलचित्रलाई समिक्षक तथा दर्शकहरुले निकै रुचाए । चलचित्रको सफलता सँगै बिभिन्न देशहरुबाट समेत चलचित्र प्रदर्शनको मागहरु आईरहेको कुरा अन्तर्बार्ताको क्रममा दिपकराज गिरीले जानकारी दिएका छन । चर्चित नायिका दिपाश्री निरौला निर्देशित चलचित्र अष्ट्रेलियाको मेलबोर्न, अमेरिका, जापन, कोरिया लगाएत सर्बत्र माग बढिरहेको । हास्य कलाकारहरुले नै निर्माण गरेको यो चलचित्रमा दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, शिबहरी पौडेल, जितु नेपाल, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’,बुद्दी तामाङ ‘हैट’ लगायतका कलाकारको मुख्य भुमिका रहेको छ । हाल चलचित्र सफलताको जश्न मनाईरहेका ‘छक्का पञ्जाका’ नायक तथा लेखक चर्चित कलाकार दिपकराज गिरीसंगको कुराकानी यहाँ प्रष्तुत गरिएको छ ।
छक्का पञ्जाको क्रेज सातौं हप्तामा आईपुग्दा पनि उस्तै छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनुभएको छ ?
चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेको छ । हजुर हामीले अनुमान गरे भन्दा धेरै अगाडि वढेर चल्दैछ । नेपालको चलचित्र इतिहासमा त सवैलाई उछिनेर प्रथम नै भई सक्यो । चलचित्रले संपूर्ण चलचित्रको रेकर्ड ब्रेक गर्यो नि । चलचित्रबाट नसोचेको सफलता पाएका छौं । यसको माग त झन वढ्दो गतिमा गैरहेको अवश्था छ ।
अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ अझै कति समयसम्म दर्शकको साथ पाउला ?
चलचित्र चलेको सात हप्ता पुगिसक्यो । दर्शकले गरेको मायाँको कुनै अनुमान गर्न सकिदो रहेनछ । घृण गरेको भए सिधै अनुमान हुन्थ्यो । दशै सम्म चल्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो तर दर्शकहरु अघाउनु भएन यो सिलसिला त झन अगडि वढ्ने देखेको छु ।
तिहार सम्म पुग्ने भो त ?
अहिले सर्वत्रवाट आएको माग हेर्दा त्यस्तै लाग्दै छ । नेपालका मुख्य शहरका सवैजसो हलहरुमा लागि रहेको छ । नलागेका हलहरुले पनि यो चलचित्र लगाउन थाल्नुभएको छ । विदेशका पनि धरै देशहरुमा चलि रहेका छन माग झन वढ्दो छ । खास गरि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापन कोरिया लगाएतको मुलुकमा लागेको छ र लाग्ने क्रम पनि जारि छ ।
चलचित्रले अहिले सम्म कति कमायो होला भन्न मिल्छ ?
यस्तो कुरा मैले आधिकारिक रुपमा भन्न त मिल्दैन । यो ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरा पनि होईन यद्दपि १४ करोड जति कमाई सकेको हल्ला सुनेको छु ।
अन्तमा केहि भन्नु हुन्छ ?
दर्शकहरुले हामीले वनाएका सवै चलचित्रलाई खुव मायाँ गर्दिनु भएको छ । हाम्रो टिम अन्तर आत्म देखि नै आभार प्रकट गर्न चाहान्छ । हामीलाई रुचाईदिनु भएकोमा मुरि मुरि धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाई, तपाईको टीम र सम्पूर्ण पाठकहरुमा तिहारको शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
बावुरामजीले मलाई केही चाँहिदैन भन्नुभएको छ, एकता एक कदम अघि बढेको छ ।
रातो ड्रेसमा रीहानको स्टाइल